Kiniin garaaf ah noocee ah ayaan iibsadaa? | Abuurista khadka tooska ah
Estamos ku dhowaanshaha iyo soo dhowaanshaha Kirismaska Oo haddaba, hadiyaduhu way yimaadaan waxaanan rajeynaynaa in mid ka mid ah xubnaha qoyskeenna ama rafiiqayagu uu na siiyo hadiyad wanaagsan, tanina, iyadoo ay tahay naqshadeeye garaaf, maxay ka fiican tahay kiniinka garaafka wanaagsan?
Haddii aan raadineyno shirkad runtii soo saarta wax soo saarka ugu fiican, magac ayaa si dhakhso leh uga soo baxa afkeenna mana aha mid kale oo aan ahayn Wacom. Waa saas kiniiniyada ugu fiican ee sawirada waxaa abuuray shirkadan, laakiin hadda, ka dib markaan ogaanno nooca aan dooneyno, waa inaan eegnaa moodooyinka kala duwan si aan ugu dambeyntii u dooranno mid, tanina waxay ku xirnaan doontaa baahiyadeenna, tan iyo farqiga u dhexeeya Cintiq oo bamboo waa weyn tahay.
3 Saaxiibka Cintiq
Una kiniin jaantus ah oo raqiis ah iyo in kasta oo aanu lahayn dhammaan faahfaahinta Noocyada hore ee Wacom waxay leedahay dhamaan isku shaqeynta aad u baahan doonto inaad ku sameyso sawir gacmeedyada ugu fiican PhotoShop. Aynu nidhaahno astaamaha taxanaha Bamboo ku dhowaad waa kuwa la mid ah kuwa ka sarreeya illaa Cintiq lala gaadho shaashadda lagu dhex daray isla kiniinka. Wacom Bamboo Pen & Taabasho waxaad ku haysaa € 84 iyo nooc ka hooseeya oo keliya € 50.
cunt Intuos waxaan aadaynaa heer kale, inkasta oo hadda ay beddelayaan Bamboo. Tusaale kan waa Wacom Intuos Pen oo aad ku heli karto € 65 taasina waa tusaale fiican oo kaniiniga jaban ah taasna waxay ku siin doontaa natiijo aan caadi ahayn. Haddii aan u tagno Intuos Pro waxaan haddaba ka hadlaynaa heer kale oo ah kiniin sawir gacmeed leh qiimo sare u kaca oo ah € 349 midka dhexdhexaadka ah, haa, kan yar oo ah 224 XNUMX.
Cintiq durba waa ereyo waaweyn waana wehelka Saaxiibkeen waa inaan ku qasban nahay ku garaac in ka badan for 1400 oo ah kiniin sawir gacmeed leh qaab isku dhafan Dhexdeeda, Intel core i7 processor, 256/512 GB SSD drive adag iyo shaashad 13,3-inch ah oo wadata HD HD 1920 x 1080. Kiniinkan waxaan runtii ku aragnaa waxa Wacom uga dhigan tahay adduunka kiniinnada garaafyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Waxaan u baahanahay kiniin garaaf ah Midkee ayaan iibsanayaa?
Maqaalkani wuxuu iila muuqdaa nacas. Kaliya maahan maxaa yeelay waxaad moodaa in qofka maqaalka qoray uusan wax fikrad ah lahayn laakiin sidoo kale waxay u muuqataa in Wacom ay lacag ku bixisay qodobkaan.
Manuel Ramírez. Fadlan. Marka dambe sifiican wax u baro oo wax badan ha u sheegin. Mahadsanid.
Wanaagsan @Manuel, waad ku mahadsan tahay dhaleeceynta. Laakiin qodobku ma doonayo inuu dhaafo oo muujiyo inaan loo baahnayn in lacag badan lagu bixiyo si loo helo tabeelo garaafyo ah oo buuxiya waxyaabaha aasaasiga ah iyo haddii aad rabto inaad heer kale aado waa inaad tagtaa Cintiq. Waxaan faallo ka bixiyaa Intuos laakiin waxaan uga gudbaa sida labada kale.
Ra'yigani wuxuu ku saleysan yahay waaya-aragnimadayda iyo waliba kuwa yar oo naqshadeeyayaal kale ah oo maalinle ah oo la shaqeeya Wacom. salaan
Waa salaaman tahay Manuel, maqaalku wuxuu ku fiican yahay aragtida aad siisay si ay ugu siman yihiin adeegsiga qaabab hal abuur leh. Qiimayaasha haddii aad diiradda saarto doolarka waxay u fiicnaan laheyd dhagaystayaasha bartilmaameedka ah sida tayda aan kuugu soo qoray Peru halkan waxaan ku aragnaa waxyaabo doolar XD ah.
Kaliya waxaan uureystay gabadheyda kiniinigaagana maqaalkaaga ayaa xaqiijinaya aragtideyda, waxaan ahay farshaxan muuqaal ah (farshaxan caag ah + naqshadeeye garaaf ah) xirfadahana waxaa lagu horumariyey isticmaalka warbaahinta, kumana imaadaan sanduuqa ay sita sheyga, iyo «Ku celcelintu waxay ku sameysaa macallinka» ma jiraan wax soo saar ah oo ku qabta shaqadaada guji. Farshaxan ahaan, xitaa waxaan bartay inaan wax ku sawiro gacanta bidix - waxaan ahay midig - iyo sida loo isticmaalo barnaamijyada vector-ka iyo dib u hagaajinta dhijitaalka ah, taas oo sida ugu wanaagsan loogu sameeyo iyadoo shaashadda lagu eegayo shaashad ahaan, aniga oo ah teeb-qorto adigoon eegin waxa aad tahay nooca, adoo adeegsanaya kiiboodh iyo toobiye.
Wuxuu rumeysnaa in Cintiq uu noqon karo, markaa, xal u helidda mushkiladda laakiin beddel-wanaagsan- insaanku wax walba wuu la qabsadaa, haddii kale taariikhda lama qori lahayn.
@Pedro waad ku mahadsantahay adiga! Ujeeddada maqaalka waxay ahayd in aan wax kale jirin. Waxaa laga yaabaa in cinwaanku uusan ahayn midka ku habboon, laakiin uu yahay in la kala saaro waxa kiniin jaban ah, kaas oo, adigoo garanaya sida wax loo sawiro sida ay aniga igu dhacdo, aad uga faa'iideysan karto si buuxda, iyo haddii aad horeyba u rabtay inaad tallaabo qaaddo tayo sare leh, u tag qiimaha weyn ee ciniq.